Maravanyika bounces back as new RCU vice-chancellor - NewsDay Zimbabwe
HomeNewsMaravanyika bounces back as new RCU vice-chancellor
THE Reformed Church University (RCU) has appointed professor Obert Maravanyika as the new vice-chancellor of the institution.
Maravanyika takes over from Wiseman Magwa, who left at the beginning of this year.
In a notice of a Press conference set for Thursday, RCU business development information and public relations officer Thelma Chimbganda confirmed the development.
“You are kindly invited to a Press conference on Thursday at the RCU’s main campus as we welcome the new vice-chancellor, Prof Obert Maravanyika,” Chimbganda said in a text message to NewsDay yesterday.
Maravanyika, the former Great Zimbabwe Univeristy (GZU) vice-chancellor, was axed from the post in 2012 following alleged political and factional interference by Zanu PF heavyweights in Masvingo.
Previous articleChamisa gnaws at Mnangagwa results
Next articleZCTU vows to continue fight for democratic institutions